Home Wararka (Deg Deg) RW Kheyre oo amray in la soo xiro Sheekh Shaakir...
(Deg Deg) RW Kheyre oo amray in la soo xiro Sheekh Shaakir & Ciidanka ASWJ oo heegan galay
Io wareedyo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ay noo xaqiijiyay in RW Xasan Cali Kheyre uu amar ku bixiyay in la soo xiro Sheekh Shaakir oo maanta loo doortay Madaxweynaha Galmudug ee garabka ASWJ.
Sheekh Shaakir oo wareysi siiyay idaacadda VOA aya sheegay in aanay dowladda Federaalka ah ku qaban karin doorasho magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna amar ku siiyay ciidanka Ahlu Sunna in ay gebi ahaanba la wareegaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb.
Sheekh Shaakir ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay uga mahad celinayaan dadaalkii ay horay ugu bixisay isu-keenidda Galmudug, hadda ay ka doonayaan inay tanaasusho si iyagu ay uga howlgalaan isu keenidda Galmudug.
Hadalka ka soo yeeray Sheekh Shaakir aya waxaa caro weyn ka qaaday RW Kheyre kaasoo isagana amray ciidanka dowladda ka amar qaata ee jooga Dhuusomareeb in xabsiga la soo dhigo Sheekh Shaakir sida ugu dhaqsaha badan.
Ciidanka ASWJ ayaa caawa saqdii dhexe la geliyay heegan buuxa, waxaana aad looga cabsi qabaa in isku dhac iyo dagaal dhex mara ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa ka amar qaata dowladda federaalka.
MOL oo la hadashay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb, ayaa waxaa ay welwel xooggan ka muujiyeen xaaladda cakiran ee ay foodda la gashay magaalada Dhuusamareeb.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo maanta loo doortay madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlu-Sunna, ayaa ka hadlay qorshaha uga degan xaaladda cakiran ee Galmudug.